Usoro Nchịkọta Google maka ọtụtụ Akaụntụ
Nchịkọta Google: Sochie Akaụntụ Ọtụtụ (Usoro Ọhụrụ)
Tuesday, April 5, 2011 Tọzdee, Disemba 1, 2011 Douglas Karr
A na-enwekarị mkpa iji soro otu ibe na ọtụtụ akaụntụ Google Analytics. Dịka ọmụmaatụ, ikekwe ị nwere ọtụtụ akụkọ - otu maka ndị ahịa na otu maka ụlọ ọrụ gị - ị ga-achọ ịtụgharị data na nke ọ bụla. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga-enwerịrị akụkọ abụọ akọwapụtara na ibe ọ bụla.
Nke a bụ ọrụ dị mfe na koodu ochie Urchin (peeji nkeTracker) mana ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị nfe karịa na ntinye akwụkwọ Google Analytics ọhụrụ enyere.
Ihu ọma, ị gbakwunye akaụntụ ndị ọzọ na _gaq array! Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtinyekwu, ị gbanwere “b” ka “c” were gabazie, were gabazie. Buru n'uche na ị na-etinye kuki na akaụntụ ọ bụla ị na-agbakwunye, agbanyeghị, yabụ, ewela oke.
Etu esi eweputa wepu aka maka ichota
Ikwuputa mmadu B2B nke nhicha data gi
Dec 6, 2011 na 3:33 PM
Ezigbo ego! Daalụ maka ịkekọrịta Doug! Enwere mmetụta ọ bụla na-emerụ ọtụtụ koodu na saịtị ma ọ bụrụ na ahazi ya nke ọma? Na mgbakwunye na mgbakwunye mgbasa nke kuki n'akụkụ niile?
Dec 6, 2011 na 3:38 PM
Onweghị ihe ọbụla ma ọ bụrụ na e mezie ya nke ọma. Ọ bụrụ n ’ịpinye mkpado edemede ole na ole na ibe, ọ nwere ike ibute kuki na mbubata ọnụego yana ọnụ ọgụgụ zuru ezu.
Apr 19, 2013 na 8: 24 PM
Mmejuputa iwu a adighi aru oru maka otu saiti anyi. Chọpụtala na ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla? Echiche ọ bụla mere ọ ga - enwe?